Ogaden News Agency (ONA) – Xuska Caalamiga ah ee Lagu Taageero Dadka La-Jidh Dilo (International Day in Support of Victims of Torture) – Ogadenya Maxaa Ka Dhaca
Xuska Caalamiga ah ee Lagu Taageero Dadka La-Jidh Dilo (International Day in Support of Victims of Torture) – Ogadenya Maxaa Ka Dhaca
Waxaa shalay laga xusay caalamka Maalinta Caalamiga ee Taageerada Dadka Jidhdilka loo Gaysto (International Day in Support of Victims of Torture – 26 June). Maalintan ayaa waxaa lagusoo bandhigaa saxaafadda caalamka tusaalo jidh-dilka iyo tacadiyada ee caalamka hadheeyay, gaar ahaan dunida sedexaad. Itobiya oo ka mid ah dalalka ay ka taliyaan booliska ee loo yaqaano (Police states) ayaa dalka Ogadenya waxay ku fasaxeen dhalinyaro sida ay sheegeen kuwa kasoo goosta ee dalalka kale yimaada in lagu balamiyo inayna u kala aabayeelin dadka shacabka ah oo laayaan, dhacaan, kufsadaan, iyagoo dambi looga dhigayo ONLF ayaa halkan martay ama aad hoosta ka jeceshihiin sida dhacday marar badan.
Tacadiyada ay maxaysatada uu madaxda ka yahay Cabdi Ilay u gaysanayaan dadweynaha ee wararkooda ay na soo gaadhayaan lama koobi karo. Xusuusta aan horey idiinla wadaagnay waxaa ka mid ahaa; Dhacdadii ay ku dileen magaalada Qabridahare dhexdeeda wiilkii jaamacadda ka soo qalin jabiyay. Waxaa kaloo ka mid ah dhacdooyinka aan kaydinay in wiil dagan Mareykanka la soo wacay, oo loo sheegay in aabihii lagu dilay magaalada Wardheer. Walaashii ayuu la xidhiidhay oo maqaaxi ku haysatay magaalada Wardheer, waxayna tidhi sidan;
“Aabe iyo laba oday oo saaxiibadii ah ayaa maqaaxida soo galay, kaftan iyo shaah casariyo ah ka dib, waxaa maqaaxidii dhanka kale ka soo galay 3 ka mid ah ragga loo yaqaano ciidamada nabad-ilaalinta deegaanka iyo kii watay. Rag Soomaaliyeed oo maqaaxi ku wada jira ayay ahaayeene way sheekaysteen, mid ka mid ah ciidamada deegaanka ayaa si kaftana ugu yidhi odayaashii waxaan maqalay inay reer Wardheerku wada noqdeen jabhad oo aan dhanka ONLF laga marayne maxaa ka jira? Odaygan la dili doono ayaa ku yidhi anagu jabhad ma nihin, haddaad ONLF iska celinaysaan wa kuwaa magaalada dibaddeeda joogee doonta odayada & dumarka ha ku meeraysaninee. Kii bilayska ahaa oo kibir isla taagaya ayaa qoriga dabadiisa odaygii ku dhuftay. Amxaaradii baa timid, oo odaygii la tagay xeradoodayna gaysteen, saacado ka dib, ayay qolyihii ciidamada deegaanka sheeganayay yimaadeen, waxay ku yidhahdeen amxaarada anagaa dhaqan soomaali hawshan ku dhamaysanaynee odayga noo dhiiba, wayna la tageen.
Inay bulsho ku cabsi galinayaan iyo in kale garan maayee, odaygii meel dhexda ah ayay ku toogteen, wayna isaga dhaqaaqeen. Ilaahay wuxuu qaddaray inuusan odaygu sida ku naf bixin, oo dad ay soo qaadeen, aqalkiisiina la keenay isagoo koleyba dhiig bax u dhiman lahaa.”
Gabadh uu qabay odayga oo ka mid ahayd dadkii dul taagnaa ayaa waxay tidhi;
“ isaga oon dul taaganahay oo dardaarmaya, daymo lagu lahaana ka hadlaya caruurtiisiina ay kuwada garab ooyayaan ayey intay aqal noogu soo galeen 7 xabadood isha kaga dhufteen. Caruurtii ayaa kala yaacday, dariskii ayaa anfariiray.
Xili lagu qiyaasey 19.08.2009 ayuu Ciidanka cabudhiska Gumeysiga ee Fadhiya Dagmada Yucub ee Gobolka Doollo/Ogadeniya, gabagabeeyey dadka Shacabka ah ee magaalada Dagan iyaga isugu yeedhey waxa loo yaqaano Gamgame ama is-Fashilinta, shirkaas oo la isugu keeney dad u badan Cuqaashii Dagmada Yucub, ayaa Shacabka loogu geystey Caga-jugleyn iyo hadii aad soo qabqaban waydaan Shuftada waan idin leyneynaa, cabsiin iyo cago-jugleyn dheer kadib ayaa waxaa dhacdey in Odey Magaalada caan ka ahaa oo la odhan jirey Maxamed Cali-Xaashi oo lagu naaneyso (Maxamed-Qawle) uu is heyn waayey oo inta Bakooradiisii la boodey ku yidhi kii khudbadeynayey Beenaaleyahow Beenta naga daa isla markaana uu madaxa Bakoorad kaga dhuftey oo halkaa kii Askariga ahaa ku dhaawacmey, intaas kadib ayey Gumeysigii dadkii xabad ku fureen kdibna ay Odeygii la tageen, Odeyga waxey geysteen Xeradooda Yucub ku taala, 3-Maalmood markey heysteen ayaa sida uu sheegey Odeygu ay dil ku xukumeen oo intey Xerada kor uga bixiyeen rasaas ku Fureen, kadibna ay Mayd ahaan u tuureen, kadibna isagoo dhiig ka da´ayo ayuu soo gurguurtey, kadibna wuxuu yimid <gurigiisa oo ku yaala Magaalada Yucub dhexdeeda, kadibna Odayadii ayaa isugu yimid, markuu waramey kadib wuxuu yidhi dardaaran iga qora, kadibna isaga dardaarankii laga qorayo ayaa Askartii Gumeysiga oo ogaatey inuu Odeygii Nolol ku tagey ay Weerar soo qaadeen iskuna gadaameen Gurigii uu Odeygu yaaley oy dheheen anaga hanalagu soo wareejiyo, kadibna arintaas waxaa diidey Duqaydii Yucub oo yidhi Ninkan Naftii ayaa ka socota idina siinmeyno, kadib Ciidankii Gumeysigu dadkii ayey Rasaas Ooda uga qaadeen si ay Dhaawaca u toogtaan, markii ay dadkii Xabadii ka kala gabadeena intey Gurigii horey u galeen ayey Odeygii 30-Xabadood ku tiriyeen kadibna iska tageen, sidaaseyna ku dileen Gumeysigu Marxuum Maxamed Cali-Xaashi (Maxamed-Qawle).